PUMA ကုမ္ပဏီနဲ့ ပေါင်သန်း(၅၀)တန်ဖိုးရှိ စပွန်ဆာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး
နာမည်ကြီး PUMA ကုမ္ပဏီနဲ့ ပေါင်သန်း(၅၀)တန်ဖိုးရှိတဲ့ စပွန်ဆာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး
5 Aug 2018 . 5:35 PM
ပရီးမီးယားလိဂ် လက်ရှိချန်ပီယံ မန်စီးတီးအသင်းဟာ အားကစားပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံက နာမည်ကြီး PUMA ကုမ္ပဏီနဲ့ (၁)နှစ်တန်ကြေး ပေါင်သန်း(၅၀)တန်ဖိုးရှိတဲ့ အင်္ကျီစပွန်ဆာစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်လို့ စပိန်မီဒီယာတွေက ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံးဘောလုံးကလပ်တွေထဲ တစ်သင်းအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ မန်စီးတီးအသင်းဟာ အခုစာချုပ်အရ ၀င်ငွေပိုမိုရလာဖို့ရှိတာကြောင့် ကစားသမားသစ်တွေ ထပ်ပြီး ခေါ်ယူအားဖြည့်သွားဖို့ရှိနေပါပြီ။
စပိန်အားကစားသတင်းစာ Mundo Deportivo က PUMA ကုမ္ပဏီနဲ့ ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ စာချုပ်တန်ဖိုးဟာ မန်စီးတီးအသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် စံချိန်တင်ပမာဏဖြစ်ခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ မန်ယူ၊ ချယ်လ်ဆီးတို့ရဲ့ နောက် တတိယမြောက် တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာမယ့်အပြင် ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီက စတင် စပွန်ဆာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် အခုဆိုရင် မန်စီးတီးအသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ စပါး၊ အာဆင်နယ်တို့ထက် စပွန်ဆာတန်ဖိုး ပိုများလာမှာဖြစ်ပြီး စပါးအသင်းက PUMA နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်အရ (၁)နှစ်ပေါင်သန်း(၃၀)၊ အာဆင်နယ်အသင်းက NIKE နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်အရ ပေါင်သန်း(၃၀)ရရှိနေတာပါ။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ လက်ရှိ NIKE နဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စပွန်ဆာစာချုပ်အရ (၁)နှစ်ကို ပေါင်သန်း(၂၀)သာ ရရှိနေတာဖြစ်ပေမယ့် ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီက စလို့ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး စပွန်ဆာပိုင်ရှင်အသင်းတွေထဲမှာ ပါဝင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး စပွန်ဆာစာချုပ်များ
Barcelona – Nike – £100m 2018-28
Manchester United- adidas- £75m 2015-25
Chelsea – Nike – £60m – 2017-32
Bayern Munich – adidas – £42.5m – 2015-30
Barcelona – Nike – £35m – 2008-18
Real Madrid – adidas – £34m – 2012-20
Chelsea – adidas – £30m – 2013-17
Arsenal – Puma – £30m – 2014-19
Tottenham – Nike – £30m – 2017-
Liverpool – Warrior – £25m – 2012-18
နာမညျကွီး PUMA ကုမ်ပဏီနဲ့ ပေါငျသနျး(၅၀)တနျဖိုးရှိတဲ့ စပှနျဆာစာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့တဲ့ မနျစီးတီး
ပရီးမီးယားလိဂျ လကျရှိခနျြပီယံ မနျစီးတီးအသငျးဟာ အားကစားပစ်စညျးထုတျလုပျရောငျးခတြဲ့ ဂြာမနီနိုငျငံက နာမညျကွီး PUMA ကုမ်ပဏီနဲ့ (၁)နှဈတနျကွေး ပေါငျသနျး(၅၀)တနျဖိုးရှိတဲ့ အင်ျကြီစပှနျဆာစာခြုပျ ခြုပျဆိုခဲ့တယျလို့ စပိနျမီဒီယာတှကေ ဖျောပွခဲ့တယျ။ ကမ်ဘာပျေါမှာ အခမျြးသာဆုံးဘောလုံးကလပျတှထေဲ တဈသငျးအပါအဝငျဖွဈတဲ့ မနျစီးတီးအသငျးဟာ အခုစာခြုပျအရ ဝငျငှပေိုမိုရလာဖို့ရှိတာကွောငျ့ ကစားသမားသဈတှေ ထပျပွီး ချေါယူအားဖွညျ့သှားဖို့ရှိနပေါပွီ။
စပိနျအားကစားသတငျးစာ Mundo Deportivo က PUMA ကုမ်ပဏီနဲ့ ခြုပျဆိုခဲ့တဲ့ စာခြုပျတနျဖိုးဟာ မနျစီးတီးအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ စံခြိနျတငျပမာဏဖွဈခဲ့ပွီး ပရီးမီးယားလိဂျမှာတော့ မနျယူ၊ ခယျြလျဆီးတို့ရဲ့ နောကျ တတိယမွောကျ တနျဖိုးအမွငျ့ဆုံးဖွဈလာမယျ့အပွငျ ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီက စတငျ စပှနျဆာပေးသှားမှာဖွဈတယျလို့ ဖျောပွခဲ့တယျ။ ဒါ့အပွငျ အခုဆိုရငျ မနျစီးတီးအသငျးဟာ သူတို့ရဲ့ပွိုငျဘကျတှဖွေဈတဲ့ စပါး၊ အာဆငျနယျတို့ထကျ စပှနျဆာတနျဖိုး ပိုမြားလာမှာဖွဈပွီး စပါးအသငျးက PUMA နဲ့ခြုပျဆိုထားတဲ့စာခြုပျအရ (၁)နှဈပေါငျသနျး(၃၀)၊ အာဆငျနယျအသငျးက NIKE နဲ့ခြုပျဆိုထားတဲ့ စာခြုပျအရ ပေါငျသနျး(၃၀)ရရှိနတောပါ။ မနျစီးတီးအသငျးဟာ လကျရှိ NIKE နဲ့ ခြုပျဆိုထားတဲ့ စပှနျဆာစာခြုပျအရ (၁)နှဈကို ပေါငျသနျး(၂၀)သာ ရရှိနတောဖွဈပမေယျ့ ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီက စလို့ ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ တနျဖိုးအမွငျ့ဆုံး စပှနျဆာပိုငျရှငျအသငျးတှထေဲမှာ ပါဝငျနိုငျတော့မှာဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ တနျဖိုးအမွငျ့ဆုံး စပှနျဆာစာခြုပျမြား
by Ko Kyue .9mins ago